Xog Muhiim ah oo ku saabsan Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta -
Xog Muhiim ah oo ku saabsan Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta
Xogo aanu ka helnay qaar ka mida shaqaalaha wasaarada batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan musuqmaasuq ba’an oo wassarada hareereeyay musuqaan ayaa salka ku haya Siminaarada ay wasaaradda ka hesho dibadda sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah shaqaalaha ka tirsan wasaaradda.
Siminaaradan ayaa waxay u xiran yihiin dad khaas ah oo uu ugu sareeyo wasiirka wasaaradda batroolka , wasiir ku xigeenka, xoghayaha joogtada, iyo afar kale oo iyaga u xilsaaran caburinta shaqaalaha,kuwaasoo kala ah 1- eng. Abiikar 2- xaydar 3-Ibraahin dheere 4- Maxamuud oo ah agaasimaha waaxda shaqalaha afartaan qof ayaa ah qurbo joog , marka laga reebo ibraahin dheere sedexda kale waa agaasime waaxyeedyo kuwaasoo bil walbo mushaar ahaan u qaato 1100 waxaa kaloo u dheer lacago lasiiyo oo cadadeedu u dhaxayso 3000- 5000 00 doolar midkiiba oo ay ku qaataan wax loogu yeero la talin.
wax walboo wasaaradda khuseeyana waxay kusoo dhacaan gacantooda iyagaana siday doonaan ka yeela.
waxaa kaloo jira in labo qof oo shaqaalaha ka tirsanaa ay tahriibeen kuwaas oo uu hada mid ka mida uu joogo maraykanka si ay usoo helaan Baasaboor ajinabi ah.
Haatan qaar ka mid ah ayaa qorshaynaya arimo tahriib ciil la baday oo ah inaysan ka bixi Karin baasaboorka soomaaliga ah loona sheegayo in loosoo diiday fiisaha dal ku galka ah sidaas darteedna ay dadka baasaboorada ajaanibta ah wato ay ku baxaan.
siminaaradii labaxay bisha November ayaa waxaa aaday inta aan kor kusoo xusnay waxaayna kala ahaayeen 1-Burundi 2-sychellies 3-Norway iyo masar oo ay u dirsadeen dad iyaga xiga kuwaas oo laba ka mida ay wasaaradda ka wateen inta kalana banaanka laga keenay.
wasaaradda shaqaalaha jooga ayaa kuu sheegaaya in ay ka niyad jabeen shaqadii wasaaradda maadaama aysan helaynin deeqaha aqoon kororsi ee la siiyo wasaaradda
ayay hadalkooda ku soo koobay shaqaalahaan oo si hoose ula hadlay Wargaysaka Tusmotimes.com
Related Items:Featured, Xog Muhiim ah oo ku saabsan Wasaaradda Bataroolka iyo Macdinta